असामान्य खिलौने संग क्रिसमस ट्री सजाउनु!
नयाँ वर्ष अझै धेरै समय सम्म तिनीहरूलाई गरौं, तर यो आज के तपाईंको घर मा क्रिसमस वृक्ष हुनेछ सोच्न समय - रंगीन बलहरु, वा विशेष र atypical केहि को रूप मा वर्दी सजावट संग एक मानक बोट। एक बच्चा रूपमा tinkering प्रेम भने, तपाईं शायद आफ्नो हातमा गहने बनाउन एक विचार को लागि, सबै छैन, तर कम से कम क्रिसमस सजावट केही आकारहरू र रंग संग घर र आगंतुकों चकित हुनेछ हुनत काम। यहाँ आफ्नै हातले खिलौने को निर्माण को मूल प्रविधी केही हो:
क्रिसमस सजावट लाइट बल्ब देखि गरे। विशेष रोचक रचनाहरूको को बल्ब फरक रंग र नेटवर्क गर्न सकिँदैन जब प्राप्त छन्। को संरचना को फारम को बल्ब यो अंश मात्र हुन सक्छ, धेरै फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यी प्रकाश बल्ब को समावेश संग पशु तथ्याङ्कले वा कला मोडेल उत्पादन गर्न सम्भव छ। इलेक्ट्रनिक्स परिचित ती लागि क्रिसमस रंग संगीतको लागि आधार मा यी खिलौने खोल्न केहि खर्च छैन।
क्रिसमस बल को गैर मानक नियुक्ति। यो आवश्यक छैन रूख शाखा मा बलमा प्रत्येक निलम्बन गर्न छ - तिनीहरूले तार वा अन्यथा प्रारुप राखिएको गर्न सकिन्छ।
तपाईं कटौती र रंग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले शायद गत्ता देखि मजा खिलौने बनाउन सक्षम हुनेछ, बाल्यकाल सम्झनाहरु evokes। खिलौने यस प्रकारको यस्तो काठ, प्लास्टिक अन्य सामाग्री, पन्नी वा धातु टुक्राहरू interspersed देखि गर्न सकिन्छ।
क्रिसमस ट्री विषय सजाउनु मूल तरिका।
यस मामला मा, सजाने गर्दा क्रिसमस रूख एक विचार केही प्रकारको लागि आधारमा लिइएको छ। उदाहरणका लागि, एक रूख खिलौने र एउटै रंग को विभिन्न रंग को चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको संग सजाया गर्न सकिन्छ, जस्तै एक "मोनोक्रोम" रूख धेरै असामान्य, तर धेरै रोचक र आकर्षक देखिन्छ। क्रिसमस ट्री बस फीका छैन लामो समय प्रयोग गर्न आवश्यक ताजा फूल सजिएको र बोट को stems गर्न सकिन्छ, - त्यहाँ कल्पना लागि कोठा को धेरै छ यहाँ। रूख चित्र, सानो यांत्रिक उत्पादनहरु (उदाहरण, भागहरु घन्टा) वा सबै पुराना कम्प्युटर डिस्क uveshat गर्न सक्नुहुन्छ। तर बाद दृष्टिकोण, पहिलो स्थानमा - सधैं सम्भाव्य, दोश्रो, Gourmets लागि डिजाइन गरिएको छ, र। Gourmets नै र "मीठो रूख", स्थित जो को केक, कैंडी र केक स्लाइस हाँगाहरू मा आनन्द हुनेछ।
सजाने गर्दा क्रिसमस रूख के हेर्न?
नयाँ वर्ष - सही क्रिसमस वृक्ष को गहने देखि एक राम्रो जाडो छुट्टी को समग्र प्रभाव निर्भर गर्दछ। यसलाई त्यसैले responsibly, क्रिसमस सजावट चयन, साथै एउटा नयाँ वर्ष रूख तमाम डिजाइन उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सजाय को सबै भन्दा साधारण तरिका
अक्सर निम्न सजावट प्रयोग:
कृत्रिम हिउँ स्प्रे - twigs को सुझाव लागू गर्न सकिन्छ खाए मात्र हिउँ छोपेको जंगल रूख बाहिर ल्याएको छाप दिनेछु एक सानो स्प्रे;
चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको, लालटेन - लगभग हरेक क्रिसमस ट्री र पाइन एउटा अत्यावश्यक विशेषता। अँध्यारो, धेरै एसोसिएट यसलाई नयाँ वर्षको उत्सव संग रोशनी फ्लिकरिङ। बहु-रंग रोशनी मित्र को हल्ला कम्पनी मा नयाँ वर्ष उत्सव लागि उपयुक्त एक सजावट उज्ज्वल र Solemn हेर्न। रोमान्टिक वातावरण सिर्जना गर्न घर को शान्ति र सान्त्वना अनुभव हुनेछ सेतो लालटेन चयन गर्न राम्रो छ;
snowflakes - सजाने क्रिसमस ट्री को लागि एक जीत-जीत विकल्प। तिनीहरूले विभिन्न आकार मा विभिन्न सामाग्री को छन्, त्यसैले पूर्ण अधिकार सजावट क्रिसमस ट्री को आफ्नो धारणा फिट हुनेछ ठ्याक्कै त्यस्तो आभूषण पाउन कठिन हुनेछैन;
क्रिसमस बल - सजाने एक क्रिसमस ट्री को एक धेरै साधारण संस्करण, एक पाइन वा स्प्रूस अप लुगा एउटा क्लासिक तरिका मानिन्छ। ठूलो आकार बेलुन रूख तल, र सानो बल संग सजाया को स्प्रूस वा पाइन रूख शीर्ष आधा मा राम्रो अड्किनुहोस्।
पनि यदि तपाईं स्प्रूस वा पाइन को सजावट मा प्रयासको धेरै खर्च र समर्थन बालुवा पुरानो जस्ती बाल्टिन चयन गरिएको छ रूपमा, एक तपाईं व्यर्थमा मा सजावट मा काम गरेको छ कि भन्न सकिन्छ। उहाँले पनि उदार तीन पङ्क्तिहरू मा घाउ लुकाउन भएन गारलैंड फ्लफी - एक उत्सव वातावरण नष्ट हुनेछन्।
निर्माता, भुइँमा क्रिसमस ट्री मदत गर्नेछ चाँडै सही र सुरक्षित कि उन्नत समाधान को एक किसिम प्रस्ताव। त्यहाँ तारा, grilles, sleigh, आदि को रूप मा रोचक अडान हो
यहाँ, सबै कुरा केवल कल्पना द्वारा सीमित छ: तपाईं एक FIR-रूख सान्टा क्लाउस र हिम पूर्व, Snowmen विभिन्न हाइट्स, साथै सामान्य मुलायम खिलौने, जाडो टोपी र स्कार्फ मा तैयार गर्न अर्को राख्न सक्नुहुन्छ।
एक स्नान लागि सन्टी twigs कटाई - विज्ञान सरल छ
बच्चाहरु को लागि कार सिट: लाभ र चयन नियम
किशोर बालिका लागि झोला कसरी चयन गर्ने?
क्यानभास कपडा: संरचना र फोटो
FRANCK मुलर - हेर्छ। फोटो र समीक्षा
आफ्नो हातमा एक सब्सट्रेट संग एक ठोस तल्ला मा laminate बिछाउने
रूस को सीमाना को कुल लम्बाइ